Bali, Java, Kalimantan, Rinka - ny anaran'ireo nosy ireo dia mampifandray ny ankamaroan'ny mpizahatany miaraka amin'ireo mpiray tanindrazana aminy any Indonezia. Mandeha amin'ny ranomasimbe roa (Indian sy Pasifika), ny firenena nosy lehibe indrindra tato anatin'ny taona vitsy dia mpizaha tany malaza. Isan-taona dia maro ireo mpizahatany vahiny any Indonezia no manintona mpizahatany maro, ary maro amin'ireo mponina ao Rosia. Izany no mahatonga ireo mpizaha tany maro liana amin'ny fanontaniana tena izy, fa mila visa ho an'i Indonezia ianao, ny fomba sy ny toerana ahazoanao azy, mba tsy hanimba ny fahatsapanao ny fialan-tsasatra.
Fanoratana ny visa
Tsara ny manamarika fa azo atao amin'ny fomba roa ny fangatahana an'i Indonezia ho an'ny Rosiana: amin'ny ambasady sy ny fahatongavanao. Ao amin'ny fidirana amin'i Indonezia, ankoatra ny mponina ao Rosia, afaka mahazo visa any amin'ny seranam-piaramanidina ihany koa ireo olom-pirenen'i Torkia, Kanada, Etazonia, firenena ao amin'ny faritra Schengen , ny Fanjakana Royaume-Uni, Kanada ary Aostralia. Ireo mpizahatany manana ny zom-pirenen'i Okraina, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Armenia, Belarosia, Moldavia, Azerbaijan, Tadjikistan ary Turkmenistan, ny fahazoan-dàlana hiditra ao amin'io repoblika io dia tokony hatao any amin'ny masoivoho. Ireo olom-pirenen'ireo firenena izay tsy voatanisa ao anatin'ireny lisitra ireny dia tokony hampiharina amin'ny visa ho an'ny departemanta visa.
Raha manapa-kevitra ny hahazo visa ianao amin'ny fahatongavanao any Indonezia, amin'ny maha-olom-pirenena ao amin'ny Federasiona Rosiana azy, dia ataovy izay hahazoana antoka fa ny fahamendrehan'ny pasipaoronao dia tsy misy latsaky ny enim-bolana mialoha ny daty hidirana ao amin'ny repoblika. Ankoatra izany, dia misy tapakila miverina. Noho izany, ny vidin'ny visa ho an'i Indonezia dia $ 25, saingy ao amin'ny repoblika dia tsy afaka maharitra mihoatra ny telopolo andro. Marihina azafady, ao anatin'ny pasipaorony dia tokony asiana taratasy kely iray farafaharatsiny, mba hahafahana mametraka azy eo amin'ny tsangambato manokana.
Haka fotoana lavalava kokoa ny fisoratana anarana eto Rosia. Mba hahazoana visa, alaharo alohan'ny pasipaoro iray , dika amin'ny pejy manontolo vita, sary roa (loko, 3x4). Ao amin'ny ambasady, mameno endrika roa ianao. Ankoatra izany, raha mividy tapakila ianao dia tokony hanome azy ireo koa. Raha mikasa ny hizotra any amin'ireo tany hafakely ireo miaraka amin'ny zanakao ianao, dia raiso miaraka amin'izy ireo mari-pamantarana ny mari-piterahany. Raha mbola tsy sivy taona ilay zaza dia miditra ao amin'ny pasipaoron'ny ray aman-dreniny izy, avy eo dia nomena maimaim-poana ny visa. Ny zaza latsaky ny sivy dia hahamendrika ny ray aman-dreniny. Ny visa toy izany dia handany eo amin'ny $ 60, fa hanome anao izany raha mahomby ny vokatra ao anatin'ny herinandro.
Ho tonga any amin'ny seranam-piaramanidin'ny Indoneziana ianao dia hangatahana hameno ny karatry ny fifindra-monina. Tokony halefa izy mandra-pialan'i Indonezia. Ankoatra izany, na eo am-baravarana na eo amin'ny fivoahana avy any amin'ny repoblika dia ilaina ny mandoa lany, izay mitovy isa 10 dolara.
Zava-misy sy voafetra
Rehefa avy namoaka visa iray ianao, any Indonezia dia tsy afaka mijanona afa-tsy 30 andro monja, fa manofa fiara hafa ihany koa, mahazo tany sy trano. Raha tsy manan-jo hitondra fiara ianao, dia amin'ny 12-15 dolara dia afaka mividy fahazoan-dalana iray ianao izay mety ho 30 andro. Ny fijery iraisana dia ny hoe ao Denpasar (seranam-piaramanidina Indoneziana lehibe indrindra), ny teratany Rosiana dia voatery mampiseho ny fitaovam-piadiany amin'ny trano fandraisam-bahiny, fanambarana banky avy amin'ny kaonty ary miverina tapakila - fiction!
Raha mikasika ireo faneriterena, any Indonezia dia afaka misintona mihoatra ny roa litatra amin'ny alikaola, sigara roanjato sy tavoahangy maromaro maromaro amin'ny fampiasana azy manokana. Fa ny fitaovana elektronika, printy sy fanafody avy amin'ny Sinoa, vokatra vetaveta, fipoahana ary fitaovam-piadiana dia voarara tsy hiditra! Ny fanondranana solontenan'ny repoblikana amin'ny karazana fauna sy flora tsy fahita firy - taboo! Ny fandraràna sahala amin'izany dia mihatra amin'ny fanondranana sombin-tsigara. Aza manandrana akory aza, satria ampy ny sazy. Nefa ny vokatra fahatsiarovana dia entana tsy misy famerana.
Inona no ho hitanao any Anapa sy ny manodidina azy?
Ny hôpitaly avo indrindra eto an-tany
Ski resort Pukhtolova Gora
Inona no hitranga any Prague amin'ny 3 andro?
Toerana misy roezy
Lasa ambany ny mari-pana vatana
Myrtle - fikarakarana tokantrano, ny tsiambaratelon'ny fambolena mety
Fomba hisafidianana fanadiovana vaksiny - torohevitra mahasoa sy torohevitra mahasoa
Ny vokatra miteraka fananganana gazy
Siramamy kesika maina
Sary ho an'ny bain
Volombolon'i Lavash miaraka amin'ny akoho nifoka sigara
Misy ankizy miaraka amin'i Jennifer Aniston ve?
Polinazine nandritra ny fitondrana vohoka
Bat - famantarana
Modely alim-pandehanana 2018 ho an'ny zazavavy - ireo modely sy loko modely indrindra amin'ny vanim-potoana vaovao